नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या एक करोड, मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ९९ हजार १ सय २४ !
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या एक करोड, मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ९९ हजार १ सय २४ !
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दियो संक्रमण अझ बढ्न सक्ने चेतावनी
कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा हाल सम्म सम्म २५ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा एक लाख २५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा निको हुनेको संख्या करिब ६ लाख ८० हजार रहेको छ । नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या १२७७२ नाघेको छ भने २८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन ।
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या एक करोड नाघेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका विभिन्न देशमा गरी संक्रमितको संख्या एक करोड एक हजार ५ सय २७ रहेको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ९९ हजार १ सय २४ रहेको छ । त्यस्तै संक्रमण पुष्टि भएकाहरुमध्ये ५० लाख ६५ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् ।
अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी प्रभावित ब्राजिलमा करिब १३ लाख १३ हजार संक्रमित भएका छन् भने करिब ५७ हजारको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा ७ लाख २७ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् ।
रुसमा संक्रमितको संख्या करिब ६ लाख ३३ हजार नाघेको छ । रुसमा कोरोना संक्रमणबाट ९ हजार ६० जनाको मृत्यु भएको छ । रुसका ३ लाख ९८ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् ।
GO TO HOME PAGE, click on the photo below